ishawa yetyalar kunye neshushu seqondo lobushushu
Ibhokisi ibhokisi 1040 7.5 6.5 1.00 114.50 34.00 16.50
Ishawa yelanga yangaphandle i-100% inikwe amandla lilanga. Ayisebenzisi iingcingo kunye neebhetri. Kumhlaba onamandla anqabileyo okhulayo, ulondolozo lwamandla yinto engenakuphepheka kwikamva. Kwangelo xesha, uyilo olusebenzisa amandla elanga ikwangumzamo wethu wokukhusela okusingqongileyo.
Ukutshiza okuphezulu kunokujoliswa ngokwendlela yokuhlanjwa kwabantu kunye nokuphakama. Olu luyilo luvumela abantu beendawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, nokuba ngamadoda okanye ngabasetyhini, ukuba bathathe ibhafu efanelekileyo kakhulu ngokweemeko zabo. Uyilo lomntu lwenza ishawa yangaphandle ibe lula ngakumbi.
Lonke uyilo olumnyama: Umnyama ungadityaniswa ngokugqibeleleyo kwiindawo ezininzi ngaphandle kokuvela ngokungalindelekanga. Kwangelo xesha, umnyama okwangoku yeyona mibala ithandwayo kwintengiso. Yonke into emnyama ithetha isitshixo esisezantsi, kwaye isebenza kuwo nawuphi na umcimbi. Ingabekwa elunxwemeni, egadini kunye nakwicala lokuqubha.
Sinesinye ithemometha esithe xaxa kule shower yelanga. Njengeeshawari yelanga enokufudumeza amanzi ngamandla elanga, ithemometha yongezwa ukukhusela ngcono ngokuchasene neengozi zobushushu ezigqithisileyo. Ithemometha yenzelwe ukwenza ishawa yelanga ikhuseleke ukusetyenziswa.
Egqithileyo Eyona ndawo ithengiswayo yokuthengisa isampu yelanga
Okulandelayo: Elungiselelweyo isilinda encinane isilinda ishawa yelanga